Magaciisu wuxuu ahaa Ted Bundy - iHorror
Bogga ugu weyn Waxyaabaha Naxdinta LehDembi run ah Magaciisu wuxuu ahaa Ted Bundy
Magaciisu wuxuu ahaa Ted Bundy
Maanta Amazon waxay sii daayeen docuseries-kooda Ted Bundy: Dhimashada Dila. Inkasta oo Bundy uu dib ugu soo laabtay indhaha dadweynaha sanadihii la soo dhaafay, taxanahan ayaa doortay inay diiradda saaraan muraayad cusub. Haatan haweenkii uu saameeyay gacan ku dhiiglaha ayaa hadlaya.
Waxay qaadatay inbadan oo kamid ah haweenkan sanado, xitaa tobanaan sano inay la yimaadaan khibradahooda. Waxay ku doodayaan in sheekooyinkooda la iska indhatiray sheekada "geesiga" sheekada; way ka daaleen Ted Bundy oo la weyneeyo.
Inbadan oo kamid ah dhibanayaasha Bundy ma aysan baxsan, laakiin maqnaanshahooda qoysaskooda iyo asxaabtooda ayaa uhadlaya iyaga, qaar badan markii ugu horeysay. Docuseriesers waxay iftiimineysaa haweenkan siyaabo aan dukumiintiyo hore, maqaallo, iyo buugaag aan u lahayn. Maaha magacyo ama sawirro kaliya. Waa gabdho, walaalo, saaxiibo, isku fasal. Haweenkan ayaa ugu dambeynti cod la siiyaa muddo ka badan afartan sano.
Toddobaatanaadkii ee Haweenka
Docuseries-ku waxay dib u xusuusinayaan sida horaantii 1970-yadii ay u ahaayeen budhcad xoreynta galmada iyo isbeddelada kacaanka ee haweenka. Haweenku waxay doonayeen sinnaanta fursadda iyo inay xakameeyaan jirkooda, jinsigooda, iyo taranka. Mar dambe ma aysan dooneynin inay la degaan fikradda ah in loo arko inay yihiin waxyaabo jinsiyeed; oo rag badan baa waaliday.
Kaliya laguma arkin tan xarumaha jaamacadaha naadiyada cusub ee la aasaasay, fasalo ku saabsan barashada haweenka, iyo isu soo baxyada, laakiin sidoo kale warbaahinta sidoo kale. Telefishanku wuxuu muujinayaa sidii Mary Tyler Moore iyo Gabadhaasi ay u soo bandhigeen haween madax bannaan oo ku nool nolol madaxbannaan.
Elizabeth iyo Molly Kendall
Labada haween ee xukuma sheekada qayb ahaan waa Elizabeth "Liz" Kendall iyo gabadheeda Molly. Hooyada iyo gabadha ayaa horey sanado badan uga maqnaa circus ka dib Ted Bundy, laakiin hada kama aamusayaan.
Hooyo Liz Kendall iyo gabadheeda Molly Kendall
Liz waxay dib u xasuusataa markii ugu horeysay ee ay la kulmaan wiilka quruxda badan ee naadiga habeenkii halkaas oo uu ka codsaday inay qoob ka ciyaaraan. Wadahadal ka dib waxay weydiisatay in guriga loo kaxeeyo shisheeyaha quruxda badan ee magaciisa ku sheegay Ted. Waxay ka codsatay inuu u hoydo, laakiin ma aha dabeecad galmo. Labadooduba waxay ku hoydeen sariirteeda sariirteeda, iyadoo huwatay, gogosha dusheeda.
Subaxdii dambe Kendall way layaabtay markii ay soo jeedday waxayna aragtay Bundy oo goor hore soo toosay, oo gabadheeda ka kicisay sariirta qolka fadhiga, waxayna ku jirtay jikada iyadoo quraacaynaysa. Kani waa sawirka ugu fog ee ka soo baxa bahallada la xidhiidha magaca. Laga bilaabo maalintaas Bundy wuxuu sii degay qoyskooda oo ka kooban laba qof.
Kendalls iyo Ted
Qeyb ka mid ah docuseries labaduba waxay sharraxayaan kulankoodii ugu horreeyay ee ay la leeyihiin Bundy. Waxay baaraan dareenkooda bilowga ah, waaya-aragnimadooda, iyo afartooda sano ee ugu horreysa wadajir. Liz waxay u guurtay Seattle iyadoo rajo ka qabta inay u shaqeyso Jaamacadda Washington. Waxay rabtay inay nolol cusub u bilowdo nafteeda iyo gabadheeda oo 3 jir ah iyadoo hadafkeedu yahay la kulanka Mr. Right. In yar bay ogaatay in cidda ay la kulantay ay intaas uun noqonayso.
Sannadihii ugu horreeyay Liz iyo Molly waxay ku xisaabtamayaan sida saaxiibkii indhaha buluuga ahaa iyo aabbe u hanqal taagaya aabbohood uu isugu dhexgalay qoyskooda. Bundy wuxuu la ciyaari lahaa Molly iyo carruurta xaafadda. Qoyska aan loo baahnayn ee saddexda ah waxay ku martiqaadi doonaan Bundy walaalkiis da'da 12 sano jir ah dibedda.
Bundy iyo Kendalls
Qeybta ugu horeysa waxay tan ku diiwaan galineysaa sawirro badan oo muujinaya waxa soo bandhigaya waqtiyada farxadda, xusuusta midabada leh, iyo wejiyada dhoola cadeynaya ee aad iloobeyso inaad daawaneysid bandhig ku saabsan dilaa taxane ah Waa aragti ku saabsan nolosha Bundy ee naxdinta leh ee u janjeedhay dhiigga iyo gumaadka uu caanka ku yahay.
Hirarku Waxay Bilaabeen Inay Isbadalaan
Kendall waxay jeclaatay gabadha yar ee Bundy waxayna dareentay inay kujirto xiriir aad u jecel. Si kastaba ha noqotee, markii sanadihii ay sii socdeen calamada casaanka ayaa si tartiib tartiib ah u bilaabay inay muuqdaan. Qiyaastii laba sano iyo bar xiriirkii, qiyaastii hal sano iyo badh ka hor dilkii ugu horreeyay ee la soo wariyay, mid ka mid ah calammadii ugu horreeyay ayaa kor u kacay. Bundy wuxuu ku faani lahaa Liz wax ku saabsan xatooyada.
Waa xaqiiqo caan ah Bundy inuu ahaa kleptomaniac. Qaar badan oo ka mid ah walxaha shakhsi ahaaneed ee Bundy uu helay noloshiisa oo dhan waa la xaday, wuuna ku riyaaqay inuu uga sheekeeyo waxyaabahan la gaadhay. Kaliya maahan faan, laakiin si geesinimo leh ayuu ugu faanay.
Waqtigaas Bundy sidoo kale wuxuu u shaqeyn jiray xisbi Jamhuuriya ah. Mid ka mid ah shaqadiisu waxay ahayd inuu dabada ka riixo qofka ka soo horjeeda isaga oo isku qarinaya xogna uruurinaya. Wuxuu ku faani lahaa inaan la aqoonsan oo aan weligiis la aqoonsan. Tani waa markii Bundy uu xaqiiqsaday qiimaha iyo awoodda inuu noqdo chameleon, oo uu gadaal u adeegsaday intuu noolaa dilka.
Dilka Ayaa Bilaabmay
Sida ku xusan xisaabaadka badankood, Janawari 4, 1974 Bundy wuxuu dilkiisii ​​ugu horreeyay ka geystey Degmada Jaamacadda. Karen Epley waligeed lama kulmin Bundy ka hor inta uusan u soo gelin qolkeeda oo uu si naxariis darro ah u weeraray. Dhaawacyadeeda garaafka ah waxay keeneen kaadiheysta jeexan, dhaawaca maskaxda, iyo sidoo kale maqal iyo araga labadaba.
Ka badbaaday Karen Epley
Intii ay ka sheekaynaysay khibradeeda, Epley waxay sharraxaysaa tani waa markii ugu horreysay ee ay waligeed ka hadasho dhacdada. Waxay rabtay inay lahaato asturnaan iyo inay nolosha u gudubto. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale qirtay inay jirto hawo ilaalinaysa sirta dambiilayaasha iyo dambiyadooda. Isla dareenkaas ah "ilaalinta dambiilaha" wali wuu nool yahay maanta, waana sababtaas sababta dad badan oo dhibbaneyaasha faraxumeynta ahi aysan horay ugu sii socon inay soo sheegaan dambiyada.
4 toddobaad kadib
Bil uun kadib Janaayo 31, Bundy markale ayuu garaacay. Dembigan wuxuu lahaa waxyaabo badan oo la mid ah weerarkii Epley, laakiin dhibbanaha Linda Healy ma badbaadin. Xisaabta Healy waxaa u sheegaya dadka ay isla degan yihiin iyo qoyskeeda oo codkeeda iyo sheekadeedaba sii wada.
Healy waxay ku nooleyd guri gabdho ah markii qolkeeda la jabsaday waana la garaacay oo qolkeeda laga afduubay. Lama cadeyn inay dhimatay iyo inkale markii laga saaray hoygeeda. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sharaxay in Bundy ay sariirteeda u sameysay si ay u daboosho dhiiga furaashka, waxay ka saartay dharka hurdada ee dhiiga lahaa si ay ugu keydiso armaajo, waxayna ugu labisay dhar nadiif ah ka hor inta aysan guriga ka kaxeynin.
Waqtigaan waxaa u muuqday Kendall inay jiraan isbadalo badan oo ka dhaca Ted. Mid ka mid ah farqiga u muuqda ee muuqda ayaa ahaa in Bundy uu baabi'i doono maalmo markiiba. Waxay sidoo kale ku lug yeesheen dagaallo badan oo xagga afka ah, kuwaas oo uu si deggan u degganaa intii lagu jiray.
Gabadha Molly sidoo kale way xusuusataa waqtiyadan. Waxay dib u xasuusineysaa inaysan arag Bundy inta badan, iyo sidoo kale waxqabadyo la xiriira qoysaska oo u dhexeeya saddexda. Liz tan shaqsiyan bay qaadatay waxayna bilawday inay cabo. Wax yar kama aysan ogeyn in shakhsiyaddiisu is beddeleyso, ka maqnaanshaha jir ee nolosheeda, iyo isbeddellada niyadda ee qallafsan ay xusayaan inay iyada ku sameeyaan. Tani waxay ahayd bilowgii xilligii Bundy ee dilka.
BundyUdhaca KillerKendallliz kendallmolly kendalldilaagaDilaayaasha SialTed Bundy
'Dhimashada Kombat: Aargudashada Scorpion' Trailer Ayaa Helay Qiimeyn
'Meel Degan Qaybta 2' Dhibcaha TV-ga ee Kahor Super Bowl-ka